Macluumaad | Radio Himilo | Page 20
Home / Macluumaad (page 20)
Ninka ugu da’da weyn shaqaalaha adduunka oo howl-gab noqonaya!
Mahad Mohamed January 18, 2020
Himilo – Ninka ugu weyn shaqaalaha adduunka oo dhan ayaa shaaciyay in uu howl-gab ka noqonayo shaqada isaga oo da’diisa tahay 102 jir. Sida ay qortay wakaalada AP, Bob Vollmer oo ka shaqeeya gobalka Indiana ee Mareykanka ayaa qorsheynaya in ...
Lamaanayaal xafladooda arooska ku dhigtay meel ku dhaw foolkaano
Mahad Mohamed January 15, 2020
Himilo – Lamaanayaal u dhashay Philippines ayaa ku adkeystay inay ku dhigtaan xafladda arooskooda meel ku dhaw folkaanaha Taal sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaasi. Muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujiyay lamaanayaasha Chino iyo Palomar oo arooskooda uu ka ...
Maxbuus caddaalad darro loo xukumay 30-sanno kahor oo la sii daayay
Himilo – Jerry Thomas oo hadda 62 jir ah ayaa laga sii daayay xabsi ku yaalla dalka Mareykanka oo uu ku qaatay muddo 30 sanno ah kaddib markii la oggaaday in uusan gelin danbiga loo xukumay. Sannadkii 1991-kii ayaa lagu ...
Maqaayad saartay ganaax lacageed macmiil weydiiyay su’aal doqonimo ah
Mahad Mohamed January 14, 2020
Himilo – Dhacdo weyn ayay noqotay oo layaab ku reebtay dad badan markii maqaayad ku taalla magaalada Denver ee Mareykanka saartay ganaax lacageed mid kamid ah macaamiisheeda sabab la xiriirta weydiin lagu tilmaamay doqonimo. Qofka macmiilka ah ayaa baraha bulshada ...
Jarmalka oo ku guuleystay in uu kala furfuro bambooyin ka haray dagaalkii labaad ee dunida
Mahad Mohamed January 13, 2020
Himilo – Maamulka Jarmalka ayaa ku guuleystay in uu kala furfuro labo bam oo ah haraadiga dagaalkii labaad ee dunida oo laga helay magaalada Dortmund ee galbeedka dalkaasi. Kumanaan qofood ayaa laga daad gureeyay guryaha ku dhaw goobta sida laga ...
Immisa carruur ah ayaa dhalatay maalintii ugu horreysay ee sannadka 2020-ka?
Mahad Mohamed January 12, 2020
Himilo – Maalintii ugu horreysay sannadka 2020-ka, ku dhawaad 392 kun oo cunug ayaa ku dhashay caalamka oo dhan sida laga soo xigtay hay’adda Qaramada Midoobay. UNICEF ayaa sheegtay in Hindiya ay ku dhasheen dhallaanka ugu badan oo gaaraya 67,000, ...
Waa maxay dhalashada labaad oo ay heysato haweenayda ugu lacagta badan Afrika?
Himilo – Haweenayda ugu taajirsan qaaradda Afrika Isabel dos Santos ayaa shaacisay inay heysato dhalashada dalka Ruushka oo ay qaadatay markii ay dhalatay. Gabadha uu dhalay madaxweynihii hore ee Angola José Eduardo dos Santos ayaa wareysi ku sheegtay inay tahay ...
Haweenay wajaheysa ciqaab markii ay ka tagtay sawirrada hoggaamiyaasha W/Kuuriya oo gubanaya!
Mahad Mohamed January 11, 2020
Himilo – Hooyo u dhalatay Waqooyi Kuuriya ayaa wajaheysa khatarta ah in la xero sabab la xiriirta inay dab ka kacay gurigeeda ka badbaadisay carruurteeda iyada oo ka tagtay sawirrada hoggaamiyaasha dalkaasi oo gubanaya. Wasaaradda amniga Waqooyi Kuuriya ayaa baaritaan ...
Bilyaneer dadka ku xeran boggiisa Twitter-ka kala gaarsiinaya 9 Milyan oo doolar
Himilo – Bilyaneer u dhashay dalka Jabaan ayaa dadka kala socda bartiisa Twitter-ka kala gaarsiinaya lacag dhan 9 Milyan oo doolar isaga oo qiimeynaya haddii lacagtaasi kor u qaadi karto farxadooda iyo inkale. Shuruuda keliya ee laga doonayo dadka la ...
Kalmadda Insha Allaah oo lagu biiriyay qaamuuska Jarmalka
Mahad Mohamed January 8, 2020
Himilo – Kalmadda Insha Allaah ayaa si rasmi ah uga mid noqotay kalmadaha si weyn looga adeegsado dalka Jarmalka iyadoo tani dhalisay in lagu daro qaamuuska dalka. Muslimiinta Jarmalka ee kala jooga gobolada dalkaasi ayaa si joogta ah u adeegsada ...